China 1.6mm prototype fast standard standard FR4 PCB abakhiqizi nabaphakeli | Kangna
Uhlobo lwento: FR-4
Min imbobo usayizi: 0.40mm
Iqedile ukujiya kwebhodi: 1.2mm
Qeda: hola mahhala HASL
Umbala wesifiva sesolder: luhlaza okotshani
Isikhathi sokuhola: izinsuku eziyi-8
Ibhodi lesifunda eliphrintiwe liyinto ebalulekile ye-elekthronikhi, ngumzimba wokusekelwa wezinto zikagesi, othwala uxhumano lukagesi lwezinto zikagesi. Ngoba yenziwa ngokunyathelisa ngogesi, ibizwa ngokuthi ibhodi yesifunda “ephrintiwe”.
Cishe yonke imishini ye-elekthronikhi, kusukela emawashini kagesi nakuma-calculator kuya kuma-computer, amadivayisi wezokuxhumana kanye nezinhlelo zezikhali zamasosha, ISEBENZISA amabhodi aphrintiwe ukwenza ukuxhumana kwegezi phakathi kwezakhi inqobo nje uma kunezinto zogesi ezifana namasekhethi ahlanganisiwe. Ibhodi lesifunda eliphrintiwe lakhiwa yipuleti lokuvikela izinto, izintambo zokuxhuma kanye nepuleti yokunamathisela ukuhlanganisa izingxenye zikagesi ezishiselwe. Inemisebenzi emibili yokwenza imigqa nokuvikela ipuleti lesisekelo. Ingathatha indawo yezintambo eziyinkimbinkimbi, ibone ukuxhumana kagesi phakathi kwengxenye ngayinye yesekethe, hhayi kuphela ukwenza lula ukuhlangana kwemikhiqizo ye-elekthronikhi, umsebenzi wokushisela, ukunciphisa indlela yendabuko yokuthwalwa komsebenzi, kunciphise kakhulu ukuqina kwabasebenzi; Iphinde inciphise ivolumu yawo wonke umshini, yehlisa izindleko zomkhiqizo, futhi ithuthukise ikhwalithi nokwethembeka kwemishini kagesi. Amabhodi wesifunda aphrintiwe anokuvumelana okuhle komkhiqizo futhi kungenziwa kube semgangathweni ukwenza lula ukusetshenziswa kwemishini kanye nokuzenzekelayo enqubweni yokukhiqiza. Ngasikhathi sinye, lonke ibhodi lesifunda eliphrintiwe ngemuva kokulungisa amaphutha emhlanganweni lingasetshenziswa njengengxenye ezimele yokusiza ukwenza kube lula ukushintshana nokugcinwa kwayo yonke imikhiqizo yomshini. Njengamanje, ibhodi lesifunda eliphrintiwe lisetshenziswe kabanzi ekwenzeni imikhiqizo kagesi
Ngokuya ngenani lezendlalelo zesekethe, lihlukaniswa libe yiphaneli elilodwa, iphaneli ephindwe kabili nephaneli ye-multilayer. Ama-laminate ajwayelekile ngokuvamile ayizingqimba ezi-4 noma ezi-6, futhi izingqimba eziyinkimbinkimbi zingafinyelela izingqimba eziningi.
Olandelayo: 8.0W / mk ukushuba okuphezulu kokushisa kwe-MCPCB kwesibani sikagesi